HomeWararka CiyaarahaReal Madrid iyo Barcelona oo ku dagaalamaya saxiixa da’yar ka tirsan Red Bull Salzburg
December 3, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayaan saxiixa da’yarka Red Bull Salzburg ee Benjamin Sesko .
18-sano jirkaan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxdiisa Austria intii lagu jiray ololihii 2021-22, isagoo dhaliyay toddobo jeer, waxaana uu ka qeyb qaatay seddex caawin 21 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Sesko ayaa heshiis kula jira Salzburg ilaa June 2026, laakiin sida laga soo xigtay El Nacional , dalab ku kacaya €25m (£21.3m) ayay u badan tahay inay tixgeliso Red Bulls.
Warbixinta ayaa sheegeysa in labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ay si weyn u doonayaan da’yarka, kaasoo dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeeyay ee Slovenia ciyaar ay la ciyaareen Malta bishii October.
Sesko ayaa sidoo kale afar jeer kasoo muuqday heerka guruubyada ee Champions League xilli ciyaareedkan, halka uu seddex gool dhaliyay 13 kulan oo horyaalka ah.
Manchester City , Liverpool iyo Arsenal ayaa dhamaantood hore loogu tiriyay xiisaha ay u qabaan da’yarkan.